बुटवलको कोरोना अस्पतालबाट पीसीआर परीक्षणविनै २७ जनालाई घर पठाइयो – Kanika Khabar
बुटवलको कोरोना अस्पतालबाट पीसीआर परीक्षणविनै २७ जनालाई घर पठाइयो
Kanika Khabar २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार ११:१३ June 6, 2020 मा प्रकाशित
जेठ २४, बुटवल ।
बुटवलको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा भर्ना भएका २७ जनालाई पीसीआर परीक्षणविनै घर पठाइएको छ । डिस्चार्ज गरिएकाहरु रुपन्देहीका १८ र कपिलवस्तुका ९ जना छन् । यस अघि उनिहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरीएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिका अनुसार कोरोनासँग मिल्दो लक्षण नदेखिएकाले डिस्चार्ज गरीएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले जानकारी बताएकाछन । उनले जेठ २० गते जारी गरिएको निर्देशिका अनुरुप पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाइएको समेत बताए । यस अघि १४ दिन आइसोलेसनमा बसेपछि लगातार दुईपटक पीसीआर परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने गरिएकामा यस पटक नयाँ निदेशिका अनुसार त्यसो नगरी घर पठाइएको हो ।
घर पठाइएकालाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रले निगरानी गर्ने भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने डा. गौतमले बताएकाछन ।
सरकारको पछिल्लो नीतिले समुदायमा कोरोना संक्रमण झन् फैलिने डर जनमानसमा छाएको छ ।
कोरोना संक्रमित निको नहुँदै डिस्चार्ज